Izindaba - Usayizi omkhulu wokusika owenziwe ngokwezifiso umshini wokusika we-laser ukufakwa eSingapore
Yimodeli yangokwezifiso ephezulu, lo mshini usayizi osebenza kahle wokusika osebenzayo
I-3000 * 12000 mm, amathuluzi omshini womzimba omkhulu wokuqala womshini ngenqubo eyodwa yokwakha, isixazululo sobuchwepheshe bokunemba okukhulu kwamathuluzi womshini ngenxa yezinkinga eziningi zokucubungula izingxenye, ikhasimende linelisekile ngezixazululo zethu ze-laser kanye nomsebenzi ngemuva kwensizakalo yokuthengisa, thatha isinqumo ukuthenga amandla aphezulu we-15000W fiber laser cutting machine kusuka ku-SUNTOP ngokuzayo.
Ngo-Okthoba owedlule, iSeshini yesihlanu yeminyaka yeKomidi eliPhakathi le-19 le-CPC laphela. Iseshini lenqwaba lenze uhlelo olubanzi lwentuthuko yaseChina phakathi nesikhathi se- “14th five plan plan”, futhi ichaze inhloso yesikhathi eside yowezi-2035. Lokhu kukhombisa ukuthi, kusukela ngonyaka ozayo, iChina izongena esigabeni esisha sentuthuko, futhi entsha Umqondo wentuthuko uzophinde uqaliswe, futhi kwakhiwe iphethini entsha yentuthuko enomjikelezo omkhulu wasekhaya njengoba umzimba oyinhloko kanye nokusakazwa okubili kwasekhaya nakwamanye amazwe okukhuthazana kufanele kwakhiwe.
Esigabeni esisha sentuthuko, umqondo omusha wentuthuko kanye nephethini entsha yentuthuko, ukuvulwa kuhlale kudlala indima ebalulekile. Umbukiso wesithathu we-China International Import Expo wabanjwa ngemuva kweSeshini yesihlanu yePlenary Session yeKomidi Elikhulu le-19 Leqembu LamaKhomanisi laseChina. Iqhubekile nokumemezela ukwakhiwa kwenkangala entsha ukuze kuvulwe, kukhuthazwe ukuthuthukiswa okusha kwezokuhwebelana namanye amazwe, kuqhutshekwe kwenziwe ngcono indawo yebhizinisi, futhi kuqiniswe ukubambisana kwamazwe amabili, amazwe amaningi kanye nezifunda. Lezi zinyathelo ezine ezintsha yimibhalo yaphansi ehamba phambili ekuvezweni kokuvulwa kwezinga eliphakeme eSigabeni Sesihlanu Sokwakhiwa KweKomidi Elikhulu le-19 le-CPC.
“Umnyango wokuvula uzovuleka kuphela ngokubanzi nangokubanzi” ukuzibophezela kweChina okungenakunyakaziswa. Isiphakamiso esiqhubekayo sezinyathelo zokuvula sikhombisa ukuthi ukuvulwa kweChina kuxhumene kakhulu futhi kuqhubeka njalo. Umhlaba ungabona ukuzethemba, ukuzimisela nokubekezela kokuvulwa okuqhubekayo kweChina.
"I-China izokwandisa ngokungangabazeki ukuvulwa kwayo ngendlela ejikelezayo, ukuze imakethe yaseChina ibe yimakethe yomhlaba, imakethe ehlanganyelwe kanye nemakethe yawo wonke umuntu, futhi ifake amandla amahle emphakathini wamazwe omhlaba." Amazwi kaMongameli Xi Jinping atshele umhlaba ukuthi “ukuvula” kuyisisekelo esibalulekile. Kungenxa yokuthi kunezinkulungwane ezingamashumi ezinkulungwane zezizinda "ezivulekile" emhlabeni. Ukuncika ekubambisaneni nasekusebenzeni ndawonye, ​​imephu yezomnotho yomhlaba iveza uhlangothi olucebile nolunemibala. Emthunzini webalazwe lomnotho womhlaba, iChina ibilokhu imemezele izindlela zokuvula futhi iphakamisa ukuthi wonke amazwe kufanele asebenze ngokubambisana ukukhuthaza ukuvulwa okuvamile kokubambisana kwama win win, ukubambisana kanye nokubusa ngokubambisana, okuchaza ukukhetha kweChina “wokuma ohlangothini lwesokunene lomlando”, okubeka isibonelo kuwo wonke amazwe ukuthi ngokuhlanganyela avuleke futhi enezela umbala ogqamile ebalazweni lomnotho lomhlaba.
Isikhathi Iposi: Jul-28-2020
Umshini Wokusika i-Fiber Laser Pipe, Umshini Wokusika i-Fiber Laser, Umsiki we-Tube Laser, Umshini Wokusika we-China Fibre Laser, Pipe Fibre Laser umsiki, Umshini wokusika we-Tube Laser,